Profil amin'ny orinasa - YTO POWER
YTO POWER dia mpanamboatra maotera mpanentana maotera any Sina ary orinasa an'ny China YTO Group
Ao amin'ny YTO POWER dia manana ny ivon-toeran'ny Teknolojia (National Technical Center) isika mba hanao fikarohana momba ny milina solika, ary manana fifandraisana akaiky amin'ny andrim-pikarohana malaza manerantany toa ny AVL any Aotrisy, Alemana FEV any Allemagne, YAMAHA any Japon ary ny Ivontoerana fikarohana any Southwest any Etazonia. Ny tanjontsika momba ny fikarohana sy ny fampandrosoana, miaraka amin'ny asa mafy ataon'ireo mpiasan'ny fahaiza-manao za-draharaha dia ahafahantsika manohy ny famolavolana milina maotera.
Ao amin'ny YTO POWER, manamboatra ny vokatrao izahay araky ny fenitra iraisam-pirenena. Izahay dia ISO9000, ISO14000 ary TS-16949 voamarina, ary ny milina diesel, dia manamarina ny US EPA, ny European Emark ary ny fanamarinana CE. Androany, mpanjifa dia tadiavin'ny mpanjifa manerantany.
Izahay izao dia manana toby famokarana milina maotera lehibe roa, ny iray ao amin'ny tanànan'i Taizhou, Faritanin'i Jiangsu, mamokatra YD (YANGDONG) andiam-pandresena telo sy cylinder efatra misy herinaratra manomboka amin'ny 10kw ka hatramin'ny 100kw, ary ny iray hafa ao amin'ny tanàna Luoyang, Faritanin'i Henan. famokarana andian-dahatsoratra Lyl sy YM efatra-cylinder sy milina diesel enina-cylinder. Power ramg manomboka amin'ny 100KW ka hatramin'ny 500kw. Amin'ny alàlan'ny tamba-jotra iraisam-pirenena marketing, ny vokatra YTO POWER izao dia amidy any amin'ny firenena sy faritra 100 mahery manerana izao tontolo izao.
Izahay ao amin'ny YTO POWER dia manantena ny hiara-miasa amin'ireo mpanjifa manerantany mba hamoronana hoavy tsara kokoa! Azafady mba ampahafantaro ny ekipanay mivarotra raha mila fanazavana fanampiny.